UK oo karantiili doonto dadka da’dooda ka wayn tahay 70-ka sano |
Dowladda UK ayaa waddo qorshe muddo dheer lagu karantiilayo dhammaan dadka da’doodu ka wayn tahay 70 sano, si looga badbaadiyo cudurka Coronavirus, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka dalkaasi.
Matt Hancock ayaa Sky News u sheegay in tallaabadaasi tahay mid dadka da’da ahi iyo kuwa u nugul cudurkani si weyn looga codsanayo in ay is-karantiilaan maadaama arrintani tahay mid iyaga u dan ah oo lagu badbaadinayo.
Dowladda dalkaasi ayaa wajahaysa cadaadis xooggan oo ah in ay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo lagu xakamaynayo saameynta cudurkani, ka dib markii tirada dadka u dhintay cudurkaasi ee UK ay gaartay 21 qof.
Dadka cudurkani u dhintay intooda badan ayaa ah dad da’dooda ay ka wayn tahay 60 ama qaar qabay xanuunno kale.
Tallaabadan ay dadkani da’da ahi isku karantiilayaan ayaa ka dhigan in dadku lagu amrayo in ay guryahooga ka soo bixin isla markaana aysan jirayn cid soo booqanayso balse albaabka loo soo dhigayo sahay ku filan.
Hancock ayaa ka gaabsaday in uu caddeeyo mudda ay tahay in dadkani karantiilka ku sii jiri doonaan, wuxuuna sheegay in si faahfaahsan ay arrintan ugu hadli doonaan marka xilligeeda la gaaro.
Balse waxa uu intaasi raaciyay in sababta aan arrintaasi hadda loo dhaqan gelin ay tahay in muddada loo baahan yahay ay tahay mid aad u dheer.
Arrintan ayaa timid xilli saynisyahannada dalkaasi ay aad u dhaliilayaan qorshaha dowladda ee ay kula tacaalayso cudurkan, waxana qaar ka mid ah Saynisyahannadani ay dhambaallo u direen wasiirrada dalkaasi oo ay ugu baaqeen in la qaado tallaabooyin xooggan oo lagula tacaalayo cudurkan.
Guud ahaan dalkaasi UK, waxaa la xaqiijiyay in cudurkani uu ku dhacay 1,140 oo qof halka 37,746 kale baaritaan lagu wado.
Ra’iisalwasaare Boris Johnson ayaa lagu wadaa in ugu baaqo shirkadaha dalkaasi in ay ka qayb qaataan “dedaallada qaran” ee wasaaradda caafimaadka dalkaasi looga caawin lahaa sidii ay u heli lahayd qalabka lagula tacaalayo cudurkan.
Dhanka kale, xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa shacabka dalkaasi ugu baaqay in aysan u safrin dalka Spain, waa haddii buu yiri aysan jirin arrin muhiim ah.
Mareykanka ayaa Britain iyo Jamhuuriyadda Ireland ku soo daray waddamada reer Yurub ee uu xayiraadda dhanka socdaalka ahi ku soo rogay.